Posted on March 4, 2009April 28, 2009 by kyawkyawoo	Posted in islamTagged al Quran, allah, ကျမ်းမြတ်ကုရအန, ဂျူး, တမန်တော်မိုးဇက, လမ်းညွန်သစ္စာဖြစ်ကြောင, အစ္စလမ်ဘာသာ ကို နားလည်ခြင်း, ရေရှူ, burmese muslim, Burmese Muslims, chinese muslims, Holy Quran, Is the Quran Allah's word?, islam, Islam ကို နားလည်ခြင်း, islam. burmese muslim. myanmar muslim, myanmar muslim minority, myanmar muslim students, religion, understanding Islam	ပြီးခဲ့တဲ့ Post, Islam ကို နားလည်ခြင်း တစ်နဲ့နှစ်မှာ Islam ဘာသာဝင် မဟုတ်သောညီနောင်များ ကို Islam ရဲ့ အနှစ်သာရကို တတ်နိုင်သလောက်ကြိုးစားပြီးရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။
အခုဆက်ရေးမဲ့အကြောင်း က Allah မှဖန်ဆင်းခံလူသားများ အတွက် နောက် ဆုံးပိတ်ပြီးပြည့် စုံသော ကျမ်း အ ဖြစ်ပေးသနား ခဲ့သောကျမ်းမြတ်ကုရအန်သည် Allah ရဲ့ လူသားအားလုံးအတွက်လမ်းညွန်သစ္စာဖြစ်ကြောင်းကို အောက်ပ်ါခေါင်းစဉ်နဲ့ ဆွေးနွေးလိုပါတယ်။
မဖတ်ဖူးပဲ မဟုတ်ဖူးလို့ ပိတ်ငြင်းနေမဲ့အစား ရိုးသားဖြူစင်ပြီးအမှန်တရားကိုသိလိုတဲ့စိတ်နဲ့ကုရအန် ကိုဖတ်ကြည့်ပါ။ အံ့ဩပြီးချက်ခြင်း Allah ကိုဦးချပြဝတ်ပြုတဲ့ထိကုရအန်က
Characteristics of HypocritesSule Pagoda and the Mosque, Testimony of religious tolerance in the past